Home Wararka Wasiir Jamal oo banaanka soo dhigay itaalka siyaasadeed ee MW Deni? Dhawacayna...
Wasiir Jamal oo banaanka soo dhigay itaalka siyaasadeed ee MW Deni? Dhawacayna kalsoonida Deni!
MW Deni oo dad badani rumeysnaayeen in uu awood siyaasadeed oo buuxda ku lahaa Puntland ayaa waxa uu hada uu muuqdaa in uusan lahayd awooda lagu tuhmayay ee uu ku leeyahay Puntland iskaba daa tan Soomaaliya.
Arintaa waxa si aad ah looga dareemayaa deeganada Mudug, Sool iyo Sanaag oo shacabka ku dhaqan deegaanadaas ay gabi ahaanba ka soo horjeedaan MW Saciid Dani, inkastaa oo ayan si toos ah u cabiririn dareenkooda hadaba Saciid Deni wax uu u muuqdaa in ay daawanayo riwaayad siyaasadeed oo mala-awaal ah.
Safarka Wasiirka Qorshaynta xukuumadda Federaalka Soomaaliya, Jamaal Maxamed Xasan ayaa waxa uu banaanka soo dhigay awooda siyaaseed ee MW Deni isaga oo u muujiyay in uusan isaga ka xigin Puntland. MW Deni ayaa qaaday tilaabo kastaa oo uu uga hor imaanayo safarka iyo shirarka Wasiir Jamal, laakiin dhamaantood waa uu ku ceeboobay ka dib markiiuu ku fashilmay in uu is-horistaago safaraka iyo qorshaha Jamal iyo beeshiisa.
Wasiir Jamal oo xalay su’aalo lagu weydiiyay kulan ka qabsoomay caasimadda Garoowe ayaa ka hadlay khilaafka isaga iyo madaxda Puntland. Wasiir Jamaal ayaa sheegay in khilaafka u dhexeeya isaga iyo mas’uuliyiinta dowladda Puntland uu yahay mid ku salaysan arrima dhaqaale iyo siyaasad oo keliya.
Wasiirka ayaa tilmaamay in mar kasta mas’uuliyiinta Puntland ay kala hadlaan mashaariic ku kooban dana shakhsiyeed, balse aysan kala hadlin wax la xiriira danaha iyo horumarinta Puntland.